Bit By Bit - Fametraham-panontaniana - koa fanehoan-kevitra
Fampidirana (Fizarana 3.1)
Maro ireo lohahevitra ao amin'ity toko ity ihany koa no nanako tao vao haingana Filoham-Addresses ao amin'ny American Fikambanan'ny Public Opinion Research (AAPOR), toy ny Dillman (2002) , Newport (2011) , Santos (2014) , ary Link (2015) .
Raha mila fanazavana fototra ara-tantara momba ny fampandrosoana ny fanadihadiana fikarohana ianao, dia jereo Smith (1976) sy Converse (1987) . Bebe kokoa momba ny hevitra telo eras ny fanadihadiana fikarohana ianao, dia jereo Groves (2011) sy Dillman, Smyth, and Christian (2008) (izay manapaka ny telo eras fomba hafa kely).
Tampon'isan'ny ao anatin'ny tetezamita hatramin'ny voalohany ny faharoa vanim-potoana ao amin'ny fanadihadiana ny fikarohana dia Groves and Kahn (1979) , izay manao ny antsipirihany loha-to-loha fampitahana eo amin'ny tava-tava sy ny telefaonina fanadihadiana. Brick and Tucker (2007) mijery indray amin'ny tantara fampandrosoana ny kisendrasendra tarehimarika dialing fomba santionany.
Misy fanazavana ny fomba fikarohana niova fanadihadiana tany aloha ho setrin'ny fiovana eo amin'ny fiaraha-monina, dia jereo Tourangeau (2004) , Mitofsky (1989) , ary Couper (2011) .
Mangataka vs. mitandrina (Fizarana 3.2)
Ny fianarana momba ny anatiny fanjakana amin'ny alalan'ny fametrahana fanontaniana mety ho olana satria indraindray ny namaly ny tenany dia tsy mahafantatra ny firenena anatiny. Ohatra, Nisbett and Wilson (1977) manao zavatra tena taratasy amin'ny evocative lohateny: "Filazana mihoatra noho isika mahafantatra: Verbal tatitra eo amin'ny ara-tsaina dingana." Ao amin'ny taratasy ny mpanoratra hanatsoaka hevitra: "foto-kevitra dia indraindray (a) tsy mahalala ny fisian'ny handrisika izay zava-dehibe vokany valiny, (b) tsy mahalala ny fisian'ny ny valiny, ary (d) tsy mahalala fa ny handrisika efa voa ny valiny. "
Fa ny hevitra izay mpikaroka tokony tia nandinika ny fitondran-tena ny tatitra fihetsika na toe-tsaina, jereo ny Baumeister, Vohs, and Funder (2007) (psikolojia) sy Jerolmack and Khan (2014) sy ny valinteny (Maynard 2014; Cerulo 2014; Vaisey 2014; Jerolmack and Khan 2014) (sosiolojia). Ny fahasamihafana eo manontany sy mijery ihany koa ny miseho eo amin'ny toe-karena, izay miresaka momba ny voalaza mpikaroka ka nanambara tiany. Ohatra, afaka manontany ny mpikaroka namaly na Aleon'ny mihinana gilasy na mandeha ny fanaovana fanatanjahan-tena (nilaza tiantsika) na ny fikarohana matetika afaka hitandrina ny fomba ny olona mihinana gilasy ka mankanesa any amin'ny fanaovana fanatanjahan-tena (nambara safidinao). Misy fisalasalana lalina ny sasany tiany karazana tahirin-kevitra voalaza ao amin'ny toe-karena (Hausman 2012) .
Ny foto-kevitra lehibe indrindra avy amin'ireo adihevitra dia ny hoe ny tatitra foana ny fitondran-tena tsy marina. Kanefa, tonga dia ao ny fitondran-tena dia mety tsy ho marina, tsy azo nangonina amin'ny santionany mahaliana, ary mety tsy ho azon'ny mpikaroka. Araka izany, ao amin'ny toe-javatra sasany, heveriko fa fihetsika ny tatitra mety ho ilaina. Ankoatra izany, nisy foto-kevitra lehibe indrindra faharoa avy amin'ireo adihevitra dia ny tatitra momba ny fihetseham-po, fahalalana, fanantenana, sy ny heviny tsy araka ny marina foana. Saingy, raha ny vaovao momba ireo fanjakana anatiny dia ilaina ny mpikaroka-na mba hanampy amin'ny fanazavana ny sasany ho toy ny fihetsika na zavatra ho hazavaina-dia nangataka mba ho tsara.
Total fanadihadiana fahadisoana (Fizarana 3.3)
Fa boky lava fanadihadiana tanteraka fitsaboana amin'ny fahadisoana, jereo ny Groves et al. (2009) na ny Weisberg (2005) . Fa ny tantara ny fampandrosoana ny fanadihadiana tanteraka fahadisoana, jereo ny Groves and Lyberg (2010) .
Eo amin'ny fisoloana tena, be teny fanolorana ny olana ny tsy valinteninao sy ny tsy fitongilanana valinteny dia ny National Council fikarohana tatitra momba Nonresponse in Social Science fanadihadiana: A Research Agenda (2013) . Iray hafa ilaina ankapobeny ny nomen'ny (Groves 2006) . Koa, manontolo olana manokana ao amin'ny Journal de Official Statistics, hevi-bahoaka Quarterly, sy ny tantaran'ny ny Akademia Amerikanina Momba ny Siansa Politika sy ny ara-tsosialy no navoaka tao amin'ny ny lohahevitra momba ny tsy hamaly. Farany, raha ny marina dia misy fomba maro samy hafa ny fikajiana ny valiny tahan'ny; fomba ireo dia voafaritra amin'ny an-tsipiriany ao amin'ny tatitra avy amin'ny Amerikanina Fikambanan'ny hevi-bahoaka ny mpikaroka (AAPOR) (Public Opinion Researchers} 2015) .
Ny kanto 1936 Digest fitsapan-kevitra efa nianatra tamin'ny an-tsipiriany (Bryson 1976; Squire 1988; Cahalan 1989; Lusinchi 2012) . Izany ihany koa no ampiasaina ho toy ny fanoharana mba hampitandrina an'i hiankina amin'ny kisendrasendra izany fanangonana antontan'isa (Gayo-Avello 2011) . Tamin'ny 1936, George Gallup Nampiasa be pitsiny kokoa endriky ny santionany, ary afaka mamokatra bebe kokoa vinavina marina amin'ny kely be santionany. Gallup ny fahombiazana eo ny asa soratra Digest dia Niavaka ny fampandrosoana ny fanadihadiana fikarohana (Converse 1987, Ch 3; Ohmer 2006, Ch 4; Igo 2008, Ch 3) .
Eo amin'ny fandrefesana, lehibe loharano voalohany hitondrana fampianarana fanontaniana no Bradburn, Sudman, and Wansink (2004) . Fa efa be kokoa fitsaboana mifantoka manokana amin'ny toe-tsaina fanontaniana, dia jereo Schuman and Presser (1996) . More amin'ny fanaovana fitiliana mialoha ny fanontaniana tsy ampy amin'ny Presser and Blair (1994) , Presser et al. (2004) , ary Chapter 8 ny Groves et al. (2009) .
Ny mahazatra, boky-lava fitsaboana ny varotra-eny vola lany eo amin'ny fanadihadiana sy ny fanadihadiana fahadisoana no Groves (2004) .
Iza no mba hanontany (sampana 3.4)
Classic boky-lava ny fitsipika fitsaboana mety santionany sy ny tombany dia Lohr (2009) (more enti-mampiditra ny) sy Särndal, Swensson, and Wretman (2003) (more mandroso). Ny boky mahazatra-lava ny lahatsoratra fitsaboana-stratification sy mifandray fomba no Särndal and Lundström (2005) . Amin'ny toe-javatra sasany vanim-potoana nomerika, mpikaroka mahalala tena kely momba ny tsy namaly, izay matetika tsy marina tamin'ny lasa. Samihafa ampy fanitsiana valinteny tsy dia azo atao raha manana vaovao momba ny mpikaroka tsy namaly (Kalton and Flores-Cervantes 2003; Smith 2011) .
Ny Xbox fianarana ny Wang et al. (2015) dia mampiasa ny teknika atao hoe multilevel ny fihemoran'ny sy ny lahatsoratra-stratification (MRP, indraindray antsoina hoe "Mister P") izay mamela mpikaroka mba haminavina sela dia midika na dia misy maro, maro ny sela. Na dia misy sasany adihevitra momba ny kalitaon'ny ny tombatombana avy amin'izany teknika, dia toa toy ny mampanantena faritra mba hijery. Ny teknika no nampiasaina voalohany tany Park, Gelman, and Bafumi (2004) , ary nisy tatỳ aoriana mampiasa sy ny adihevitra (Gelman 2007; Lax and Phillips 2009; Pacheco 2011; Buttice and Highton 2013; Toshkov 2015) . Bebe kokoa momba ny fifandraisana eo amin'ny vato tsirairay sy ny sela-monina vato mahita Gelman (2007) .
Fa fomba hafa ny weighting aterineto fanadihadiana, jereo ny Schonlau et al. (2009) , Valliant and Dever (2011) , ary Bethlehem (2010) .
Sample mifandraika no naroson'ny Rivers (2007) . Bethlehem (2015) nandresy lahatra fa ny fampisehoana ny santionana mifandraika, ho toy ny fomba fijery santionany hafa (ohatra, stratified santionany) sy ny fomba fanitsiana (ohatra, lahatsoratra-stratification). Bebe kokoa amin'ny aterineto kobany, dia jereo Callegaro et al. (2014) .
Indraindray Hitan'ny mpikaroka fa mety santionany sy ny tsy mety santionany hamoa vinavina ny mitovy toetra (Ansolabehere and Schaffner 2014) , fa fampitahana hafa mahita fa ny tsy mety santionany manao ratsy (Malhotra and Krosnick 2007; Yeager et al. 2011) . Antony iray mety ho fahasamihafana ireo dia ny hoe tsy mety santionany efa kokoa rehefa mandeha ny fotoana. Fa ny lafy ratsin-javatra kokoa ny fijery ny tsy mety santionany fomba hahita ny ny AAPOR Task Force amin'ny Non-mety santionany (Baker et al. 2013) , ary ihany koa ny fahazoan-dalana aho namaky ny fanehoan-kevitra izay manaraka ny famintinana tatitra.
Fa ny Meta-fandalinana ny vokatry ny weighting mba hampihenana ny fitongilanana amin'ny tsy-mety santionany, jereo ny Table 2.4 in Tourangeau, Conrad, and Couper (2013) , izay mitondra ny mpanoratra mba hanatsoaka hevitra "fanitsiana toa ilaina fa hadisoana fanitsiana. . . "
Ahoana no mba hanontany (sampana 3.5)
Conrad and Schober (2008) dia manome boky natontan'i mitondra ny lohateny hoe Envisioning ny Survey Interview ny hoavy, ary miresaka maro ny lohahevitra ao amin'ity fizarana ity. Couper (2011) dia miteny toy izany lohahevitra, ary Schober et al. (2015) manome ny tsara ohatra ny fomba fanangonana antontan'isa fomba izay mifanaraka amin'ny toerana vaovao mety hiafara amin'ny antontan-kevitra tsara kokoa.
Fa ohatra iray hafa mahaliana amin'ny fampiasana Facebook ny siansa ara-tsosialy fampiharana ho an'ny fanadihadiana, dia jereo Bail (2015) .
Raha mila torohevitra amin'ny fanaovana fanadihadiana iray mahafinaritra sy manan-danja ho an'ny mpandray anjara traikefa, dia jereo ny asa amin'ny mifanaraka Design Method (Dillman, Smyth, and Christian 2014) .
Stone et al. (2007) manolotra boky lava vetivety ny fitsaboana ny ara-tontolo iainana sy mifandray fomba fanombanana.
Fanadihadiana mifandray amin'ny hafa rakitra (Fizarana 3.6)
Judson (2007) Nilaza ny dingan'ny natambatra fanadihadiana sy tahirin-kevitra ara-panjakana ho toy ny "vaovao fampidirana," miresaka mahatsara ny fomba ity, ary manome ohatra vitsivitsy.
Ny fomba iray hafa izay afaka mampiasa dizitaly mpikaroka soritra sy ny fitantanan-draharaha tahirin-kevitra dia santionany toetsika ho an'ny olona manana toetra manokana. Na izany aza, mahazo ireto rakitsoratra ireto mba ho ampiasaina ny santionany toetsika koa mamorona fanontaniana mifandraika amin'ny fiainana manokana (Beskow, Sandler, and Weinberger 2006) .
Momba naparitaka nanontany hoe: fomba io dia tsy toy ny vaovao araka izay mety miseho amin'ny fomba nanoratra azy aho. Izany fomba lalina dia manana fifandraisana amin'ny faritra telo lehibe ao amin'ny antontan'isa-modely-monina lahatsoratra-stratification (Little 1993) , imputation (Rubin 2004) , ary kely ny faritra tombany (Rao and Molina 2015) . Izany ihany koa mifandraika amin'ny fampiasana ny surrogate hiovaova amin'ny fikarohana ara-pitsaboana (Pepe 1992) .
Ankoatra ny olana momba ny etika miditra soritry ny nomerika tahirin-kevitra, naparitaka nanontany hoe mety azo ampiasaina ihany koa mba infer saropady toetra ny olona mety tsy misafidy ny haneho amin'ny fanadihadiana (Kosinski, Stillwell, and Graepel 2013) .
Ny vola lany sy ny fotoana ny vinavinan'ny in Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) manondro bebe kokoa ny miova vola-ny vidin'ny iray fanampiny fanadihadiana-ary tsy ahitana raikitra vola lany toy ny vidin'ny mba hanadio sy ny fandraisana ny antso angona. Amin'ny ankapobeny, naparitaka nanontany hoe dia mety manana raikitra vola avo sy iva miova vola lany mitovy amin'ny fanandramana nomerika (jereo ny Toko 4). More antsipirihany momba ny angon-drakitra ampiasaina ao Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) taratasy any Blumenstock and Eagle (2010) sy Blumenstock and Eagle (2012) . Fomba avy amin'ny maro imputuation (Rubin 2004) Mety hanampy ny fisamborana tsy fahazoana antoka amin'ny tombatombana avy naparitaka manontany. Raha manao naparitaka manontany mpikaroka ihany no miraharaha aggregate jerena, fa tsy olona-ambaratonga toetra, dia ny manakaiky tany King and Lu (2008) sy Hopkins and King (2010) Mety ho ilaina. Raha mila fanazavana momba ny milina fianarana manakaiky in Blumenstock, Cadamuro, and On (2015) , jereo ny James et al. (2013) (more enti-mampiditra ny) na Hastie, Tibshirani, and Friedman (2009) (more mandroso). Malaza iray hafa milina boky fianarana dia Murphy (2012) .
Momba karena nanontany hoe ny vokatra any Ansolabehere sy Hersh (2012) miankina amin'ny voka-roa manan-danja dingana: 1) ny fahafahan'ny Catalist mba manambatra ny maro mahaleotena sy angon-drakitra loharanom hamokatra marina tompony datafile sy 2) ny fahafahan'ny Catalist mba mampifandray ny valin'ny fandinihana natao ho ny tompony datafile. Noho izany, Ansolabehere sy Hersh hijery tsirairay ireo dingana tsara.
Mba hamorona ny tompony datafile, Catalist Mitambatra ary mifanaraka vaovao avy amin'ny loharanom-baovao maro isan-karazany ao anatin'izany ny: maro fifidianana sarin'ireo firaketana an-tsoratra isaky ny fanjakana, angona avy amin'ny National Post Office ny Change ny Address Registry, ary ny tahirin-kevitra avy amin'ny mpamatsy ara-barotra hafa tsy fantatra. Ny Góry tsipiriany momba ny fomba fanadiovana izany rehetra izany sy ny Nampitambatra mitranga any an-dafin'ny tafiditra amin'ity boky ity, fa ity dingana ity, na dia tsara, dia hanaparitaka ny diso ao amin'ny tahirin-kevitra tany am-boalohany sy ny loharanom-baovao dia mampiditra fahadisoana. Na Catalist Vonona ny hiresaka momba ny angona fanodinana ary manome sasany ny manta tahirin-kevitra, dia tsy afaka ny mpikaroka fotsiny mba hamerina ny tahirin-kevitra Catalist manontolo fantsona. Kosa, ny mpikaroka tao amin'ny toe-javatra izay ny Catalist rakitra angona nanana ny sasany tsy fantatra, ary angamba tsy fantatra, ny habetsahan'ny fahadisoana. Izany dia dehibe, satria mety haminavina ny mpanao tsikera fa ny fahasamihafana lehibe misy eo amin'ny fanadihadiana tatitra momba ny CCES sy ny fitondran-tena ao amin'ny antontan-kevitra tompony Catalist rakitra dia vokatry ny fahadisoana amin'ny tompony rakitra antontan-kevitra, fa tsy amin'ny misreporting amin'ny namaly.
Ansolabehere sy Hersh naka fomba roa samy hafa ny miresaka momba ny angon-drakitra kalitao. Voalohany, ankoatry ny fampitahana tena nilaza fifidianana ny fifidianana ao amin'ny Catalist tompony rakitra, ny mpikaroka ihany koa raha oharina tena-ny tatitra antoko, hazakazaka, mpifidy fisoratana anarana toerana (ohatra, voasoratra anarana na tsy voasoratra ara-panjakana) ary mifidy fomba (ohatra, ao amin'ny olona, ​​tsy tonga latsa-bato, sns) ireo soatoavina hita ao amin'ny Catalist angona. Fa isan'ny mponina efatra ireo hiovaova, ny mpikaroka nahita ambaratonga ambony be ny fifanarahana eo amin'ny fanadihadiana sy ny tatitra rakitra ao amin'ny Catalist rakitra tompony noho ny ho fifidianana. Noho izany, ny Catalist angona tompony rakitra Toa manana kalitao ambony toetra vaovao ho an'ny hafa noho ny fifidianana, milaza fa tsy ny mahantra ankapobeny kalitao. Faharoa, ny ampahany fampiasana angona avy Catalist, Ansolabehere sy Hersh lasa telo samy hafa famarana ny hatsaran'ny faritra fifidianana firaketana an-tsoratra, ary hitany fa ny Notombanana tahan'ny maherin'ny-tatitra ny fifidianana dia indrindra tsy misy ifandraisany na dia iray akory amin'ireo tahirin-kevitra hatsaran'ny fepetra, ny fitadiavana izay milaza fa ny taha avo maherin'ny-tatitra dia tsy ho entin'ny fivondronana miaraka amin'ny angon-drakitra mahazatra ambany kalitao.
Noho ny famoronana ny ity rakitra pifidianana tompony, ny faharoa loharanom-mety fahadisoana no mampifandray ny fanadihadiana rakitsoratra izany. Ohatra, raha izany dia atao linkage diso mety hitarika any amin'ny maherin'ny-tombana ny maha samy hafa ny tatitra sy ny fitondran-tena nampanan-kery ny fifidianana (Neter, Maynes, and Ramanathan 1965) . Raha olona rehetra nanana miovaova, tsy manam-paharoa Solon'anarana izay tao roa angon-drakitra loharanom-baovao, dia linkage ho misy dikany. Ao amin'ny Etazonia sy ny ankamaroan'ireo firenena hafa, na izany aza, tsy misy rehetra izao Solon'anarana. Ankoatra izany, na dia nisy toy izany ny olona Solon'anarana mety ho sahy hanome azy io ny fanadihadiana mpikaroka! Noho izany, Catalist maintsy hanao ny linkage mampiasa tsy lavorary identifiers, amin'ity tranga ity efatra tapa-baovao momba ny tsirairay respondent: anarana, lahy na vavy, taona nahaterahana, ary ny an-trano ny adiresy. Ohatra, tsy maintsy manapa-kevitra Catalist raha Homie J Simpson ao amin'ny CCES ihany ny olona toy ny Homer Simpson Jay ao amin'ny antontan-kevitra tompony rakitra. Amin'ny fomba fanao, mifandraika dia sarotra sy mahafantatra ny korontana dingana, ary, mba hanao zavatra ratsy kokoa noho ny mpikaroka, Catalist nihevitra ny teknika mifandraika mba ho format manan-tompo.
Mba kery ny mifandraika algorithms, dia niantehitra tamin'ny roa olana. Voalohany, Catalist nandray anjara tamin'ny fifaninanana mifanandrify izay nihazakazaka amin'ny tsy miankina, fahatelo-antoko: ny Mitre Corporation. Mitre nanome mpandray anjara rehetra mitabataba roa angon-drakitra antontan-taratasy mba ho mifanentana, sy ny samy hafa ekipa nifaninana mba hiverina any Mitre ny tsara indrindra mifandraika. Satria Mitre nahalala ny marina mihitsy mifandraika izy ireo afaka baolina ny ekipa. Ary tamin'ny 40 orinasa izay nifaninana, Catalist tonga amin'ny toerana faharoa. Ity karazana tsy miankina, fahatelo-antoko tombana ny format manan-tompo teknolojia dia tena tsy fahita firy sady mampino sarobidy; dia tokony hanome toky antsika fa ny mifandraika Catalist fomba ireo indrindra teo amin'ny fanjakana-avy-ny-kanto. Fa ny fanjakana-avy-ny-no tsara ampy? Ankoatra izany mifandraika fifaninanana, Ansolabehere sy Hersh namorona ny fanamby mifandraika for Catalist. Avy amin'ny tetikasa teo aloha, Ansolabehere sy Hersh efa nanangona mpifidy firaketana an-tsoratra avy any Florida. Ary nanome ny sasany amin'ireo firaketana amin'ny sasany ny sahany redacted ho Catalist ary avy eo dia nampitaha ny Catalist tatitra momba ny saha ireo ny tena soatoavina. Soa ihany ny tatitra Catalist dia akaiky ny niaro soatoavina, midika izany fa afaka mifanaraka ampahany Catalist mpifidy rakitsoratra tao ny antontan-kevitra tompony rakitra. Ireo olana roa, ny anankiray tamin'ny iray fahatelo-antoko ary ny anankiray tamin'ny Ansolabehere sy Hersh, manome antsika fahatokiana bebe kokoa ao amin'ny Catalist mifandraika algorithms, na dia tsy afaka hijery ny marina fanatanterahana ny tenantsika.
Nisy ezaka maro teo aloha mba kery fifidianana. Fa Indray Mitopy Maso An'i izay boky sy gazety, jereo ny Belli et al. (1999) , Berent, Krosnick, and Lupia (2011) , Ansolabehere and Hersh (2012) , sy Hanmer, Banks, and White (2014) .
Zava-dehibe ny manamarika fa na dia amin'ity tranga ity mpikaroka Nampirisihina ny hatsaran'ny angona avy Catalist, hafa evaluations ny mpivarotra ara-barotra no tsy feno hafanam-po. Hitan'ny mpikaroka mahantra toetra, rehefa angona avy amin'ny fanadihadiana ny mpanjifa-fichier avy Marketing Systems Group (izay natambatra mihitsy miara-angona avy telo mpamatsy: Acxiom, Experian, ary InfoUSA) (Pasek et al. 2014) . Izany hoe, ny angon-drakitra rakitra dia tsy nifanaraka fanadihadiana valinteny izay mpikaroka tokony ho marina, ny datafile efa tsy ampy antontan-kevitra ho an'ny maro ny fanontaniana, ary ny tsy ampy angona modely nisy correlated ny tatitra fanadihadiana sanda (amin'ny teny hafa ny tsy ampy antontan-kevitra dia mitohy , fa tsy kisendrasendra).
Bebe kokoa amin'ny firaketana an-tsoratra eo amin'ny fanadihadiana sy ny linkage fitantanana angona, jereo ny Sakshaug and Kreuter (2012) sy Schnell (2013) . Bebe kokoa amin'ny firaketana an-tsoratra linkage amin'ny ankapobeny, jereo ny Dunn (1946) sy Fellegi and Sunter (1969) (ara-tantara) sy Larsen and Winkler (2014) (ankehitriny). Toy izany koa no fomba ihany koa ny novolavolaina amin'ny solosaina ny siansa ambanin'ny anarana toy ny angona deduplication, ohatra famantarana, anarana mifandraika, dika mitovy tratra, ka haka tahaka firaketana tratra (Elmagarmid, Ipeirotis, and Verykios 2007) . Misy ihany koa ny fomba fiarovana ny fiainana manokana mba hanoratra linkage izay tsy mitaky ny fampitana ny vaovao famantarana manokana (Schnell 2013) . Mpikaroka ao amin'ny Facebook lasa fomba fanao iray mba probabilisticsly rohy ny rakitsoratra ny fifidianana ny fitondran-tena (Jones et al. 2013) ; izany linkage natao hanombanana ny fanandramana izay aho hitantara aminareo ny momba tao amin'ny Toko 4 (Bond et al. 2012) .
Ohatra iray hafa ny rohy iray goavana fanadihadiana ara-tsosialy ny governemanta panjakana firaketana an-tsoratra dia avy amin'ny Fahasalamana sy Retirement Survey sy ny Social Security Fitantanan-draharaha. Bebe kokoa momba izany fianarana, ao anatin'izany ny vaovao momba ny fanekena fomba, jereo ny Olson (1996) sy Olson (1999) .
Ny dingana natambatra loharanom-panjakana maro firaketana an-tompo datafile-ny dingana izay Catalist mpiasan'ny-mahazatra any amin'ny antontan'isa biraon'ny fitondram-panjakana nasionaly sasany. Roa mpikaroka avy amin'ny Statistics Soeda efa nanoratra boky tsipiriany momba ny lohahevitra (Wallgren and Wallgren 2007) . Fa ohatra izany amin'ny fomba County iray ao amin'ny United States (Olmstead County, Minnesota, an-trano ny Mayo Clinic), jereo ny Sauver et al. (2011) . Bebe kokoa ny fahadisoana izay afaka hita ao amin'ny firaketana an-tsoratra ara-panjakana, jereo ny Groen (2012) .